IJUNGALOW- Jonga kwiimbono ezingenakubethwa ngaphezulu kwePai
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguSarawut
Wamkelekile kwiJungalow. Ukuhamba okukodwa kunye nokuzola kubekwe kwiintaba zomlingo zasePai. Gxila kwindalo kwaye uvuke emva kokulala ngoxolo ukuze uphefumle ukuthatha iimbono!
IJungalow yindlu yabucala ephangaleleyo ene-en-suite enebhedi enkulu yobukhulu obutofotofo, ifriji encinci yebha, idesika, ifeni kunye negadi engqongwe zizityalo zebhanana.
NCEDA UQAPHELE SIKU-3KM EKUPHAKAMENI UKUSUKA Edolophini, KUYA KUFUNEKA UREnte KWAYE UQALE ISIKUWU/I-MOTORBIKE UKUBA UKHETHA IJUNGALOW.
Inokukhanya kwelanga okuhle kusasa kuze kube ngumthunzi emva kwemini yaye njengoko siphezulu ezintabeni sinandipha impepho epholileyo unyaka wonke. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla; ukufunda, ukugxila emsebenzini kunye nokuhlala nje kunye nebhiya kwaye ubukele iimbono ezimangalisayo zepanoramic zesibhakabhaka sePai esiguqukayo ngorhatya.
IJungalow ayiyonxalenye yendawo yokuphumla. Sisihlomelo kwikhaya lethu kodwa sinemfihlo kunye nokungena kwayo. Ummandla uhlala ngabantu bendawo ekunika ithuba lokufumana i-Pai kwimbono yokwenyani kunye nekhaya kunokuba unokufumana kwiindawo ezininzi zokungcebeleka ezijikeleze intlambo.
Le meko yendalo enoxolo ikumgama nje omfutshane we-3km ukusuka kumbindi wedolophu onomtsalane.
4.89 · Izimvo eziyi-112
Idolophu yasePai ngokwayo inomtsalane kwaye igcwele umlingiswa oneekhefi ezincinci kunye nemivalo, umculo omnandi ophilayo, ukhetho olungenakoyiswa lokutya esitalatweni kunye nobuhlobo obubekekileyo. Kodwa eyona nto ikhethekileyo ngePai yinto eyingqongileyo; indalo!
Yiyo loo nto sikhetha ukuphila apha phezulu kwiinduli ezijonge kwintlambo yasePai kunye nesikhumbuzo sikaBuddha esiMhlophe esibekwe phezu kwentaba ephambi kwethu kunye neentaba eziluhlaza ezisingqongileyo.
Nceda ukhumbule ukuba eli khaya limangalisayo lisehlathini, kukho indalo esijikelezileyo kwaye abantu ayizizo kuphela izinto ezihlala apha… yamkela kwaye uyonwabele!
Umbuki zindwendwe ngu- Sarawut
Thank you for taking the time to check out our airbnb listing. Home is where our hearts lie and we enjoy the opportunity to share our unique charm, eclectic style and comfort with others through Airbnb.
Nantoni na oyifunayo malunga nolwazi lwendawo kunye neengcebiso sivuya kakhulu ukunceda.
Sisenokwenza amalungiselelo okudibana nawe edolophini xa ufika ukuze sikukhokele kwikhaya lethu kwaye sincede ukuthutha imithwalo (ukuba ingangena kwisikuta sam).
Isithuthuthu KUBALULEKILE kule ndawo ngaphandle kokuba umkhweli webhayisikile ofaneleka kakhulu. Siphezu kweenduli! Ndinganceda ukucebisa iindawo zokurenta ukuba ziyafuneka.
Iiteksi zikhetho kodwa akusoloko kulula ukuzifumana kwaye azibaleki emva kwentsimbi yesi-9 okanye eye-10 ebusuku.
Sisenokwenza amalungiselelo okudibana nawe edolophini xa ufika ukuze sikukhokele kwikh…